Maalinta Aids-ka Aduunka oo laga xusay Maamul goboleedka Galmudug – SBC
Maalinta Aids-ka Aduunka oo laga xusay Maamul goboleedka Galmudug
Posted by Webmaster on Diseenbar 1, 2011 Comments
Xaflad lagu xusayo Maalinta Aidiska Aduunka aya maanta waxa alagu qabtay xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo gaar ahaan Dhanka maamul goboleedka Galmudug.
Xafladaasi oo ay qeyb ka aheyd wasaarada Caafimaadka Maamulkaasi Galmudug aya waxaa ka soo qeyb galay Qeybaha kala duwan ee Dhalinyarada, Ururada bulshada iyo weliba Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug.
C/laahi maxamed Xasan Wasiir ku xigeenka caafimaadka Maamulka Galmudug ayaa la hadlay Xafiiska SBC International ee Magaaladaasi, isagoona faah faahin ka bixiyay muhiimada Maalintan ku aadan Aidiska, isagoona sheegay ka maamul ahaan in ay siweyn uga shaqeynayaan bad baadada umada ayna u sameeyeen gudi u kuur galay dhibaatooyinka cudurkan uu umada ku hayo .
Waxa uu intaasi ku daray Wasiir ku xigeenku in ay qaadi doonaan Talaabooyin wacyigelineed oo lagaga hortagayo Cudurkan islamarkaana ay umada Galmudug ku wacyi gelinta sidii loogaga hortagi lahaa cudurka Aidska.
Sidoo kale waxa qeyb ka ahaa xuska Maalinta Aidska aduunka Ururada Caafimaadka sida Ururka Bisha cas waxaana iyo ururo kale oo ka shaqeeya caafimaadka iyo ka hortaga cudurkan halista ah.